Google Manisy endrika ao amin'ny takelaka Google | Martech Zone
Alarobia, Febroary 6, 2008 Douglas Karr
Mpampiasa mazoto an'ny Google Spreadsheets aho. Google dia nanisy fiasa mahaliana iray izay mety ho liana amin'ny marketing Marketing olona hanao data capture (ohatra: programa fifaninanana sy programa opt-in) tsy mila fampandrosoana matihanina. Afaka manangana forme ianao izao handefasana mivantana amin'ny Google Spreadsheet anao!
Mbola lavitra lavitra amin'ny fampiharana matanjaka toa an'io Formspring, saingy mety ho azo ampiasaina amin'ny endrika maloto sy maloto. Indrindra raha efa mampiasa ny orinasanao Google Apps. Manontany tena, ahoana ny fifaninanana Microsoft amin'izany? 😉
Tags: fanairanacinefyanaty fiarafampahatsiahivanareadytalk apiRomneySlidertakelaka media sosialystatdash
Febroary 7, 2008 amin'ny 10:54 PM
Misaotra nizara an'io...izay indrindra no ilaiko! Tsara izany satria tsy mila kaonty google ho an'ny olona hafa mampiasa azy. Hizara takelaka aho, saingy tsy ny rehetra no nanana kaonty, ankehitriny dia afaka manome ahy ny fampahalalana ilaiko izy ireo nefa tsy miasa mivantana amin'ny takelaka.
Tranga hafa momba ny vaovao tsara avy amin'i Doug!